Ny ires ny lahatsary ny saka, mampihomehy ny saka, mahafatifaty ny saka, ny saka, mampihomehy
Na dia eo aza ny ady ao Syria sy ny fahirano ao Aleppo, ny olona — Mohammad Alava Jales — entana ho an’ny taona maro amin’izao fotoana izao ny fikarakarana ho an’ny rehetra ny saka niala tao an-tanàna.
Izany tompony mitana maloto fitaka ny saka amin’ny sary miaraka tamin’ny laser. Aoka ianao hahita ny vokatr’izany sy ny fomba izay ny saka solafaka eo amin’ny tohatra. Ny marika ny akanjo Fanjakana toeram-ponenan’ny tompon-tany Japana no namoaka pullover amin’ny lehibe paosy mba hametraka ny saka sy ny flemmarder mangina eo ambony seza. Moa ve ianao sasatry ny saka any vienne eo amin’ny lohalika sy hahafinaritra indray ny rambony marina eo ambany ny orona? Eto no vaovao gem izay tokony manamboatra ity olana ity.
Teo am-pototry, dia fa tsara ny manome ny hama ny saka
Fa ny mahantra no mandray ny silaka ny manakombona ny vavan’ny ary tsy afaka ny hahita na inona na inona intsony ary avy eo dia nianjera nihemotra. Izay nilaza fa ny saka tsy toy ny rano? Ity saka manana ny rivotra nahafinaritra ny fety teo amin’ny ranomasina sy mankafy ny fotoana tsara tarehy ho an’ny kely milomano Ao amin’ity dokambarotra mba Fréchet, ny am-polony alika nanasa ny saka ho an’ny Krismasy ny mihinana amin’ny latabatra toy ny olombelona.
Ny tsara indrindra toy ny saka
Indraindray dia mila tena kely mba hahatonga ny saka sambatra: karipetra mba ho ny valanoranony, ny baolina. ‘Ny lahatsary amin’ny chat’ ny toerana manokana ao amin’ny lahatsary saka mampihomehy: mahafatifaty saka, ny saka mampihomehy, saka mampihomehy, saka mampihomehy, ninja saka, ny saka, ny saka meowing, saka dihy
← Frantsay Ankizivavy Mampiaraka ny Lehilahy amin'ny free frantsay Fiarahana Tranonkala
Frantsa Cam Chat Room - hiresaka amin'ny Vahiny →